Sonos Sued uye Anodaidzira Bhanji Kutengeswa kweGoogle Zvigadzirwa muUS | Linux Vakapindwa muropa
Iyo isina waya mutauri inogadzira Sonos Inc. yakave inozivikanwa seye smart mumhanzi mutauri mugadziri uye iri akamhan'arira Google mumatare maviri ematare edzimhosva, vachipokana kuti kambani yakaputsa patent shanu, incluyendo izvo zvinovhara iyo tekinoroji yekutaurirana zvisina waya uye kuwiriranisa vatauri nemumwe.
Sonos zvichemo zvinopfuura patent neGoogle. Kuita kwake kwepamutemo ndiko kupera kwemakore ekuwedzera kuvimba neGoogle neAmazon, izvo zvakazoshandisa simba ravo kusvina kambani diki, vatungamiriri veSonos vakati. Iyo Sonos kambani inoda yedare kwete chete kubhadhara mari, kana zvisiri zvakare kurambidzwa kutengeswa kweGoogle smart speaker, mafoni uye malaptop muUnited States.
Maererano naSonos, Google yakatanga kutyora kodzero dzayo muna2015 nekuvhurwa kwayo kwekutanga-makamuri mazhinji waya odhiyo chigadzirwa, Chromecast Audio
Kubva 2015, Sonos anoenderera mberi achiti "kutsauka" kwakadai kwawedzera simba neyakawanda-isina waya audio odhiyo yakawedzerwa kune zvigadzirwa zvakasiyana.
Mienzaniso iGoogle Home Mini, Imba yeGoogle, Google Home Max, pamwe neiyo Pixel renji ine mafoni, mapiritsi, uye kunyange malaptop.
"Google yakaramba ichienderera zvisinei nekuti Sonos akayambira Google nezve kutyorwa kwayo kanokwana kana kane nguva dzakatangira muna2016," akadaro Sonos muchichemo ichi.
Panguva imwecheteyo, Sekureva kwaSonos boss, zvirevo zvekambani zvine chekuita kwete zvakanyanya patent neGoogle, asi kune maitiro akajairika ekudzvinyirira mapiyona madiki kubva pamusika nemakambani makuru.
Nyaya iyi inoonekwa sekupera kwemakore mazhinji ekuwedzera kuvimba neGoogle neAmazon, avo vakashandisa zviwanikwa zvavo kudzinga makambani madiki, kwete chete vachishandisa tekinoroji yakajairwa asiwo nekupa mitengo mitengo kuzadza musika nezvigadzirwa zvavo.
Mhosva yacho yakamhan'arwa kuGoogle chete, kubvira Sonos haadi kurwa pamativi maviri panguva imwe chete. Mhosva yacho inoti Sonos akaramba achironga mumakore achangopfuura kuti vawane mhinduro inobatsira, asi Google vachiziva kuteedzera matekinoroji ekushandisa muzvigadzirwa zvavo havana kusangana.
Sonos anoti izvozvo kutaurirana kwakamira, seGoogle yakapindura nekumisikidza mitemo yakasimba kushandisa Google mubatsiri mupinduri mukupindura marezinesi anodikanwa kune Sonos tekinoroji.
Mutauriri we Google yakati paita hurukuro pamusoro penyaya dzepfuma pakati pemakambani kwemakore akati wandei uye Google inonyadziswa kuti Sonos afunga kumhan'ara pachinzvimbo chekuenderera mberi nekutaurirana.
Kwemakore, takave nekurukurirano dzakawanda dzichienderera mberi naSonos nezvekodzero dzezvemidziyo dzemakambani maviri uye isu tanyadziswa nekuti Sonos atangisa nyaya iyi pane kutsvaga kutaurirana kwekutenda kwakanaka.
Google haibvumirani nezviri kutaurwa uye ichazvidzivirira kushingaira mudare. Google ine mukana wekuti ishandise dziva rayo rakapamhamha rekumhan'arira Sonos, asi Sonos anogona kutarisira kugadziriswa kwakapedzwa pasi pekumanikidzwa kubva kuruzhinji rwevanhu uye kutyisidzira kweantitrust inoenderera mberi.
Kune rumwe rutivi, Amazon yakati Echo zvishandiso uye tekinoroji yekuisa masipika mumakamuri akasiyana Ivo vakazvimiririra vakagadzirwa uye havawirirane neSonos patents.
De zvibvumirano izvo Sonos anoti Google yakatyora Ndizvo zvinotevera:
US9219959: Kubatanidza maturusi ega ega kuteedzera ruzha rwemultichannel mune multimedia system.
US10209953: kurongeka kwekushanda kwechigadzirwa chekutamba mumatanho akaenderana multimedia.
US8588949: Maitiro ekugadzirisa huwandu hwehuwandu hwemazhinji-midhiya system.
US9195258: Iyo nzira yekuenderana mashandiro pane akati wandei akazvimirira multimedia zvishandiso.
US10439896: kubatana kwemidziyo yekutamba kuburikidza neWLAN.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Sonos akamhan'arira uye ari kukumbira kuti kutengeswa kweGoogle zvigadzirwa muUS kurambidzwe.